Homemade Fruit Face Masks - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Homemade Fruit Face Masks
သငျ့မကျြနှာပေါငျးမတငျမီ ပထမဆုံးစဉျးစားသငျ့တာကတော့ ” သငျဘယျလိုမြိုးလှခငျြတာလဲ ” ဆိုတဲ့အခကျြပါ။
မကျြနှာဖွူဝငျးခငျြတာလား? အရေးအကွောငျးတှလြေော့ပါးပွီးအသားအရညျတငျးရငျးခငျြတာလား? အစကျအပွောကျတှကေငျးရှငျးခငျြတာလား?….စသဖွငျ့….ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အာနိသငျပျေါမူတညျပွီး ဘယျလိုအသီးအနှံသုံးရမလဲဆိုတာ ကှဲပွားတာမို့ တဈခုခငျြးစီ သခြောပွောပွပေးမယျ….အဆုံးထိဖတျပေးနျော….
ဘယျလိုအသားအရညျမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ပေါငျးတငျတော့မယျဆိုရငျ အရငျဆုံးလုပျရမှာက
မိမိနှဈသကျရာ မကျြနှာသဈဆေးတဈမြိုးမြိုးနဲ့ ရခေပျနှေးနှေးကို အသုံးပွုပွီး မကျြနှာကိုစငျကွယျစှာဆေးကွောပါ။
-> ဒါဆိုရငျတော့ လှယျပါတယျ။
ခရမျးခဉျြသီးအမှညျ့တဈလုံးကို အရညျညှဈပွီး မကျြနှာပျေါသုတျလိမျးထားလိုကျရုံပါပဲ။
ထို့နောကျ ၁၅မိနဈ -မိနဈ ၂၀ အကွာမှာ မကျြနှာကို ရိုးရိုးရနေဲ့ပွနျသဈလိုကျရုံပါပဲ။
ခရမျးခဉျြသီးအစလေ့ေးတှကေ မကျြနှာပွနျသဈတဲ့အခါမှာ မကျြနှာပျေါမှာရှိတဲ့ ဆဲလျအသတှေကေို scrub လုပျသလို ဖယျရှားပေးမှာပဲဖွဈပါတယျ။
->အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ခွောကျသှတေဲ့အသားအရညျအတှကျ ဆိုရငျ သခှားသီးထကျကောငျးတာမရှိတော့ဘူးနျော။
သခှားသီးတဈလုံးကို အသီးခွဈတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့ခွဈ၊ အရညျညှဈ၊ ရလာတဲ့အရညျရော၊အဖတျကိုရော မကျြနှာပျေါမှာလိမျးထားပါ။
ပွီးရငျ သခှားသီးအကှငျးလေး ၂ကှငျးလှီးပွီး မကျြလုံးပျေါမှာကပျ။
15မိနဈ – မိနဈ ၂၀ လောကျနရေငျ မကျြနှာသုတျပုဝါကို ရနှေေးလေးနဲ့စိမျ၊ရညှေဈ၊ပွီးရငျ မကျြနှာကို ထိုရနှေေးဝတျလေးနဲ့သုတျပွီး သနျ့စငျလိုကျပါ။
သခှားသီးက ရဓောတျဖွညျ့တငျးပေးလို့ မကျြနှာလေးက စိုစိုလေးနဲ့ ဝငျးပလာတဲ့အပွငျ…ရနှေေးဝတျလေးနဲ့ မကျြနှာသဈလိုကျရတော့ မကျြနှာမှာ သှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးပွီး အကွောလညျးပွေ…နလေို့လညျးကောငျးပေါ့….
မကျြနှာပျေါကဝကျခွံတှေ သိသိသာသာသကျသာစခေငျြရငျတော့ စပဈြသီးလေးတှကေို ခပြွေီး ရလာတဲ့အရညျရော အဖတျရောကို မကျြနှာပျေါမှာ ခွောကျသှားတဲ့အထိလိမျးထားနျော။
အရညျတှခွေောကျသှားပွီဆိုတော့မှ ရနေဲ့ဆေးခလြိုကျရငျ တဈခဏ အတှငျး သိသာတဲ့ရလဒျကိုရမှာပါလို့….
(4)မကျြနှာအသားအရညျ ညိုညဈညဈကွီးဖွဈနပွေီလား ?
သင်ျဘောသီးမှညျ့လေးကို အရညျညှဈပွီး အရညျရောအဖတျကိုရော မကျြနှာပျေါမိနဈ ၂၀ခနျ့ လိမျးပွီး နှိပျနယျပေးပါ။ပွီးရငျ ရအေေးလေးနဲ့မကျြနှာသဈခလြိုကျပါ….
မိနဈ ၂၀ အတှငျးမှာတငျ ညိုညဈညဈအသားအရညျကွီးအစား ဝငျးပတဲ့အသားအရညျလေးအဖွဈပွောငျးသှားမှာပါ။
(5)Baby Face လေးလို နူးညံ့ခငျြတယျလား?
ကလေးငယျလေးတှရေဲ့အသားအရညျလို နူးညံ့ဝငျးပခငျြတယျဆိုရငျ တော့….ပနျးသီးလေးက ကူညီပေးပါရစတေဲ့…
ပနျးသီး ၅စိတျ ၆စိတျလောကျကို ကွိတျ၊ ပွီးရငျ ရလာတဲ့ ပနျးသီးအရညျရယျ၊အနှဈဖတျလေးတှရေယျကို ပြားရညျ လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျးခနျ့နဲ့ရောမှေ၊ မကျြနှာပျေါသုတျလိမျးထား၊ ၁၅မိနဈခနျ့ကွာလို့ ရအေေးလေးနဲ့မကျြနှာသဈခလြိုကျရငျတော့ နူးညံ့အိစကျတဲ့ Baby Skin ပိုငျရှငျလေး ဖွဈပွီပေါ့!
* ဘယျ mask အမြိုးအစားမဆို မကျြနှာကို နောကျဆုံး ရနေဲ့ မသဈခငျမှာ မကျြနှာကိုအသာအယာနှိပျနယျပေးပွီး သခြောပှတျပေးပါ။
ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ သဈသီးထဲက ဗီတာမငျဓာတျတှေ၊ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျး (Antioxidants)တှဟော အရပွေားထဲ ကောငျးစှာစိမျ့ဝငျစနေိုငျပွီး မကျြနှာရဲ့သှေးလညျပတျမှုလညျးကောငျးစပေါတယျ။
အသာအယာပှတျတိုကျခွငျးအားဖွငျ့ မကျြနှာပျေါမှာရှိတဲ့ ဆဲလျအသတှေကေိုလညျး ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။*
အားလုံးပွီးလို့ မကျြနှာသဈပွီးသှားရငျတော့ မကျြနှာကို ပုဝါနဲ့ အသာအယာရသေုတျပွီး ရဓောတျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ moisturizer တဈခုခုလိမျးထားလိုကျပါနျော။
တဈပတျတဈခါပုံမှနျ သဘာဝသဈသီးတှနေဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျပေးခွငျးဟာ အံ့မခနျးတဲ့ပြိုမဈြလှပမှုတှကေို သငျ့ထံဆောငျကဉျြးလာပေးမှာပဲ ဖွဈပါတယျနျော…..
(အသားအရညျဖွူဝငျးစဖေို့၊ အရေးအကွောငျးကငျး တငျးရငျးစဖေို့ ဘယျလိုသဈသီးတှကေိုအသုံးပွုပွီး ပေါငျးတငျကွမလဲဆိုတာကို နောကျဆောငျးပါးတဈပုဒျပွငျဆငျနတောမို့လို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော)
သင့်မျက်နှာပေါင်းမတင်မီ ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်တာကတော့ ” သင်ဘယ်လိုမျိုးလှချင်တာလဲ ” ဆိုတဲ့အချက်ပါ။
မျက်နှာဖြူဝင်းချင်တာလား? အရေးအကြောင်းတွေလျော့ပါးပြီးအသားအရည်တင်းရင်းချင်တာလား? အစက်အပြောက်တွေကင်းရှင်းချင်တာလား?….စသဖြင့်….ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အာနိသင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအသီးအနှံသုံးရမလဲဆိုတာ ကွဲပြားတာမို့ တစ်ခုချင်းစီ သေချာပြောပြပေးမယ်….အဆုံးထိဖတ်ပေးနော်….
ဘယ်လိုအသားအရည်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းတင်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက
မိမိနှစ်သက်ရာ မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေခပ်နွေးနွေးကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာကိုစင်ကြယ်စွာဆေးကြောပါ။
-> ဒါဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးအမှည့်တစ်လုံးကို အရည်ညှစ်ပြီး မျက်နှာပေါ်သုတ်လိမ်းထားလိုက်ရုံပါပဲ။
ထို့နောက် ၁၅မိနစ် -မိနစ် ၂၀ အကြာမှာ မျက်နှာကို ရိုးရိုးရေနဲ့ပြန်သစ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့လေးတွေက မျက်နှာပြန်သစ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေတွေကို scrub လုပ်သလို ဖယ်ရှားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
->အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရည်အတွက် ဆိုရင် သခွားသီးထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးနော်။
သခွားသီးတစ်လုံးကို အသီးခြစ်တဲ့ကိရိယာလေးနဲ့ခြစ်၊ အရည်ညှစ်၊ ရလာတဲ့အရည်ရော၊အဖတ်ကိုရော မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းထားပါ။
ပြီးရင် သခွားသီးအကွင်းလေး ၂ကွင်းလှီးပြီး မျက်လုံးပေါ်မှာကပ်။
15မိနစ် – မိနစ် ၂၀ လောက်နေရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ရေနွေးလေးနဲ့စိမ်၊ရေညှစ်၊ပြီးရင် မျက်နှာကို ထိုရေနွေးဝတ်လေးနဲ့သုတ်ပြီး သန့်စင်လိုက်ပါ။
သခွားသီးက ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးလို့ မျက်နှာလေးက စိုစိုလေးနဲ့ ဝင်းပလာတဲ့အပြင်…ရေနွေးဝတ်လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရတော့ မျက်နှာမှာ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းပြီး အကြောလည်းပြေ…နေလို့လည်းကောင်းပေါ့….
မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံတွေ သိသိသာသာသက်သာစေချင်ရင်တော့ စပျစ်သီးလေးတွေကို ချေပြီး ရလာတဲ့အရည်ရော အဖတ်ရောကို မျက်နှာပေါ်မှာ ခြောက်သွားတဲ့အထိလိမ်းထားနော်။
အရည်တွေခြောက်သွားပြီဆိုတော့မှ ရေနဲ့ဆေးချလိုက်ရင် တစ်ခဏ အတွင်း သိသာတဲ့ရလဒ်ကိုရမှာပါလို့….
(4)မျက်နှာအသားအရည် ညိုညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်နေပြီလား ?
သင်္ဘောသီးမှည့်လေးကို အရည်ညှစ်ပြီး အရည်ရောအဖတ်ကိုရော မျက်နှာပေါ်မိနစ် ၂၀ခန့် လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ပြီးရင် ရေအေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်ချလိုက်ပါ….
မိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာတင် ညိုညစ်ညစ်အသားအရည်ကြီးအစား ဝင်းပတဲ့အသားအရည်လေးအဖြစ်ပြောင်းသွားမှာပါ။
(5)Baby Face လေးလို နူးညံ့ချင်တယ်လား?
ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အသားအရည်လို နူးညံ့ဝင်းပချင်တယ်ဆိုရင် တော့….ပန်းသီးလေးက ကူညီပေးပါရစေတဲ့…
ပန်းသီး ၅စိတ် ၆စိတ်လောက်ကို ကြိတ်၊ ပြီးရင် ရလာတဲ့ ပန်းသီးအရည်ရယ်၊အနှစ်ဖတ်လေးတွေရယ်ကို ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်နဲ့ရောမွှေ၊ မျက်နှာပေါ်သုတ်လိမ်းထား၊ ၁၅မိနစ်ခန့်ကြာလို့ ရေအေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်ချလိုက်ရင်တော့ နူးညံ့အိစက်တဲ့ Baby Skin ပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်ပြီပေါ့!
* ဘယ် mask အမျိုးအစားမဆို မျက်နှာကို နောက်ဆုံး ရေနဲ့ မသစ်ခင်မှာ မျက်နှာကိုအသာအယာနှိပ်နယ်ပေးပြီး သေချာပွတ်ပေးပါ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သစ်သီးထဲက ဗီတာမင်ဓာတ်တွေ၊ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (Antioxidants)တွေဟာ အရေပြားထဲ ကောင်းစွာစိမ့်ဝင်စေနိုင်ပြီး မျက်နှာရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုလည်းကောင်းစေပါတယ်။
အသာအယာပွတ်တိုက်ခြင်းအားဖြင့် မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။*
အားလုံးပြီးလို့ မျက်နှာသစ်ပြီးသွားရင်တော့ မျက်နှာကို ပုဝါနဲ့ အသာအယာရေသုတ်ပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ moisturizer တစ်ခုခုလိမ်းထားလိုက်ပါနော်။
တစ်ပတ်တစ်ခါပုံမှန် သဘာဝသစ်သီးတွေနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ပေးခြင်းဟာ အံ့မခန်းတဲ့ပျိုမျစ်လှပမှုတွေကို သင့်ထံဆောင်ကျဉ်းလာပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..
(အသားအရည်ဖြူဝင်းစေဖို့၊ အရေးအကြောင်းကင်း တင်းရင်းစေဖို့ ဘယ်လိုသစ်သီးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ပေါင်းတင်ကြမလဲဆိုတာကို နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပြင်ဆင်နေတာမို့လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်)
When To Start exercise after childbirth?
Vaginal Rejuvenation/Vaginal tightening
Body Scan Meditation သို့မဟုတျ ရုပျနာမျဆကျစပျကွညျ့ရှုခွငျး ကြှနျတျောတို့တှအေနနေဲ့ တခါတရံမှာ စိတျဖိစီးမှုတှစေိုးရိမျလှနျမှုတှကွေောငျ့ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ နောကျကြောနဲ့ ပခုံးနာကွငျခွငျး၊ ကွှကျသားတငျးမာနသေလိုခံစားရခွငျးစတဲ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အဆငျမပွတေဲ့ အခွအေနမြေိုးတှရှေိလာတတျပါတယျ။ ဒါဟာစိတျရဲ့ဖိဆီးမှုတှကွေောငျ့ ခန်ဓာကိုယျကိုလာရောကျ ရိုကျခတျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကို စူးစမျးလလေ့ာပွီး စိတျဖိဆီးမှုမြားကိုသကျသာစဖေို့ လုပျဆောငျပေးလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုစူးစမျးလလေ့ာရမလဲဆိုရငျတော့ မိမိရဲ့…